မှတ်ဉာဏ်နဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို အထောက်အကူပြုတဲ့ အစားအစာ (၇) မျိုး – For her myanmar
မှတ်ဉာဏ်နဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို အထောက်အကူပြုတဲ့ အစားအစာ (၇) မျိုး
Posted on April 11, 2019 June 25, 2019 Author Stella	Comment(0)
မှတ်နိုင်စွမ်းအားက အစားလေးနဲ့ထပ်ဖြည့်လိုက်မှ ပြည့်စုံသွားတာမျိုး 😜
ယောင်းတို့ရေ… နေ့စဉ်ဘဝမှာ အစားအသောက်ကလည်း အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါနေတယ်ဆိုတာ ပြောနေစရာတောင်မလိုပါဘူး။ အပြင်စာတွေ သွားရည်စာတွေ စားတာလည်း စားပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ အစားအစာတွေ စားပေးဖို့ကိုလည်း မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ဒီတော့ stella ကနေအလုပ်လုပ်ရင် အာရုံစိုက်ဖို့ခက်ပြီး အိမ်ရှေ့မှာတုန်းက စဉ်းစားထားတာကို အိမ်နောက်ဖေးလောက်ရောက်ရင် မေ့တတ်သူတွေ မဖြစ်မနေစားရမယ့် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု အစားအစာတွေအကြောင်း ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
လေ့လာချက်တွေအရတော့ ဘလူးဘယ်ရီထဲမှာပါတဲ့ antioxidant ဓာတ်တွေက ဦးနှောက်ထဲက အောက်ဆီဂျင်နဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး စိတ်ကိုကြည်လင်စေတာကြောင့် မှတ်ဉာဏ်နဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ငါးနာရီအထက်ကြာအောင် မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ အတိတ်မေ့ရောဂါတွေကိုလည်း ဘလူးဘယ်ရီက ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
လက်ဖက်စိမ်းမှာ ကဖင်းဓာတ်နဲ့ l’theanine ဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ ကဖင်းဓာတ်ကတော့ ကော်ဖီမှာပါတဲ့ စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေတဲ့ဓာတ်ပါ။ ဒါဆို l’theanine ဆိုတာကကော ? L’theanine ကတော့ ကဖင်းကို ပြန်ထိန်းပေးတဲ့ဓာတ်ပါ။ ကဖင်းဓာတ်များတဲ့အခါ မျက်စိကြောင်ပြီး အိပ်မပျော်တာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် l’theanine က ပြန်ထိန်းပေးတဲ့အခါမှာ နှစ်ခုပေါင်းပြီး အလုပ်တွေကို မြန်မြန်နဲ့တိတိကျကျလုပ်နိုင်စေပါတယ်။
ထောပတ်သီးတွေမှာပါတဲ့ဓာတ်တွေက သွေးလည်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေတာမို့ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို ပိုအလုပ်လုပ်စေဖို့ အားပေးပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်တွေလည်း ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ဆာလောင်မှုကိုထိန်းပေးနိုင်ပြီး ဝိတ်တက်မှာလည်း စိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့။
Related article >>> ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတဲ့ အစားအစာ (Healthy meal) အကြောင်းတစ်စေ့တစောင်း
(၄) အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ ယောင်းတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒါဆိုမှတ်ဉာဏ်ကိုကော ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုလဲ ? ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာပါတဲ့ ဗီတာမင်ဘီက မှတ်ဉာဏ်နဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို တိုးစေတယ်လို့ လေ့လာချက်တွေက သက်သာပြထားပြီးပါပြီ။ ခြုံပြောရရင်တော့ ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ စွမ်းအားကို တိုးစေတာပါပဲ။
Omega-3 fatty acids ဆိုတာ ငါးမှာပဲပါတာပါ။ မှတ်ဉာဏ်နဲ့ စိတ်စွမ်းဆောင်မှုကို အထောက်အကူပေးတဲ့နေရာမှာ ထိပ်ဆုံးကပေါ့။ ဒီဓာတ်အားနည်းနေတဲ့သူတွေက မေ့တတ်တာတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ၊ စိတ်အပြောင်းအလဲ မြန်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Related article >>> ယောင်းတို့တွေ အံ့သြသွားရမယ့် Omega-3 ရဲ့အကျိုးကျေးဇူး (၆) ချက်
(၆) Dark Chocolate
သကြားတွေ နို့တွေမပါတဲ့ ချောကလက်စစ်စစ်က ယောင်းကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင် ကူညီပေးမှာပါ။ ချောကလက်မှာပါတဲ့ မက်ဂနီဆီယမ်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချပေးပြီး ပျော်ရွှင်ခြင်းဟော်မုန်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ endorphins နဲ့ serotonin တွေကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးတာကြောင့် စိတ်ကြည်လင်ပျော်ရွှင်စေတာပေါ့။ ပျော်ချင်ဇောနဲ့ အများကြီးတော့ မစားနဲ့ပေါ့နော်။ တန်ဆေးလွန်ဘေးတဲ့ …
အစေ့အဆံတွေဟာ ဗီတာမင်ဘီ၊ ဗီတာမင်အီး၊ မက်ဂနီဆီယမ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ဘဏ်တိုက်ကြီးတွေပါ။ Amino acid လည်းပါတာကြောင့် အာရုံစိုက်အားပိုကောင်းစေပြီး တစ်နေ့ကို တစ်အောင်စလောက်တော့ စားပေးသင့်ပါတယ်။
Related article >>> ယောင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပအတွက် ဗီတာမင် အီးက ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုး (၄)သွယ်
ကဲ … ဒီလောက်ဆို မေ့တတ်တဲ့ ယောင်းတွေလည်း မှတ်ဉာဏ်အားကောင်းအောင် ဘာတွေစားရမလဲဆိုတာ သိကြပြီပေါ့နော်။ Junk food လို့ခေါ်တဲ့ သွားရည်စာတွေကို အပြတ်မဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါလောက်ပဲ စားပြီး ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကို စားပေးပါ။ ကျန်းမာလှပတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ …
Ref : www.healthline.com, alifeofproductivity.com
မှတျနိုငျစှမျးအားက အစားလေးနဲ့ထပျဖွညျ့လိုကျမှ ပွညျ့စုံသှားတာမြိုး 😜
ယောငျးတို့ရေ … နစေ့ဉျဘဝမှာ အစားအသောကျကလညျး အရေးကွီးတဲ့အခနျးကဏ်ဍကနေ ပါနတေယျဆိုတာ ပွောနစေရာတောငျမလိုပါဘူး။ အပွငျစာတှေ သှားရညျစာတှေ စားတာလညျး စားပေါ့လေ။ ဒါပမေဲ့ ကနျြးမာရေးကိုအထောကျအကူပွုတဲ့ အစားအစာတှစေားပေးဖို့ကိုလညျး မထေ့ားလို့မရပါဘူး။ ဒီတော့ stella ကနအေလုပျလုပျရငျ အာရုံစိုကျဖို့ခကျပွီး အိမျရှမှေ့ာတုနျးက စဉျးစားထားတာကို အိမျနောကျဖေးလောကျရောကျရငျ မတေ့တျသူတှေ မဖွဈမနစေားရမယျ့ ကနျြးမာရေးအထောကျအကူပွု အစားအစာတှအေကွောငျး ဝမြှေပေးခငျြပါတယျ။
လလေ့ာခကျြတှအေရတော့ ဘလူးဘယျရီထဲမှာပါတဲ့ antioxidant ဓာတျတှကေ ဦးနှောကျထဲက အောကျဆီဂငျြနဲ့သှေးလညျပတျမှုကို လှုံ့ဆျောပေးပွီး စိတျကိုကွညျလငျစတောကွောငျ့ မှတျဉာဏျနဲ့ အာရုံစူးစိုကျမှုကို ငါးနာရီအထကျကွာအောငျ မွှငျ့တငျပေးပါတယျ။ ကငျဆာ၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ အတိတျမရေ့ောဂါတှကေိုလညျး ဘလူးဘယျရီက ကာကှယျပေးနိုငျပါသေးတယျ။
လကျဖကျစိမျးမှာ ကာဖငျးဓာတျနဲ့ l’theanine ဓာတျတှပေါဝငျပါတယျ။ ကာဖငျးဓာတျကတော့ ကျောဖီမှာပါတဲ့ စိတျကိုလနျးဆနျးစတေဲ့ဓာတျပါ။ ဒါဆို l’theanine ဆိုတာကကော ? L’theanine ကတော့ ကာဖငျးကို ပွနျထိနျးပေးတဲ့ဓာတျပါ။ ကာဖငျးဓာတျမြားတဲ့အခါ မကျြစိကွောငျပွီး အိပျမပြျောတာတှဖွေဈနိုငျတဲ့အတှကျ l’theanine က ပွနျထိနျးပေးတဲ့အခါမှာ နှဈခုပေါငျးပွီး အလုပျတှကေို မွနျမွနျနဲ့တိတိကကြလြုပျနိုငျစပေါတယျ။
ထောပတျသီးတှမှောပါတဲ့ဓာတျတှကေ သှေးလညျပတျမှုကို အားကောငျးစတောမို့ ဦးနှောကျဆဲလျတှကေို ပိုအလုပျလုပျစဖေို့ အားပေးပါတယျ။ အမြှငျဓာတျတှလေညျး ကွှယျဝစှာပါဝငျတာကွောငျ့ ဆာလောငျမှုကိုထိနျးပေးနိုငျလို့ ဝိတျတကျမှာလညျး စိတျမပူရတော့ဘူးပေါ့။
Related article >>> ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျစတေဲ့ အစားအစာ (Healthy meal) အကွောငျးတဈစတေ့စောငျး
ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေ ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးတယျဆိုတာတော့ ယောငျးတို့သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ ဒါဆိုမှတျဉာဏျကိုကော ဘယျလိုအထောကျအကူပွုလဲ ? ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှမှောပါတဲ့ ဗီတာမငျဘီက မှတျဉာဏျနဲ့ အာရုံစူးစိုကျမှုကို တိုးစတေယျလို့ လလေ့ာခကျြတှကေ သကျသာပွထားပွီးပါပွီ။ ခွုံပွောရရငျတော့ ဦးနှောကျကနျြးမာရေးနဲ့ စှမျးအားကို တိုးစတောပါပဲ။
Omega-3 fatty acids ဆိုတာ ငါးမှာပဲပါတာပါ။ မှတျဉာဏျနဲ့ စိတျစှမျးဆောငျမှုကို အထောကျအကူပေးတဲ့နရောမှာ ထိပျဆုံးကပေါ့။ ဒီဓာတျအားနညျးနတေဲ့သူတှကေ မတေ့တျတာတှေ၊ စိတျဓာတျကတြာတှေ၊ စိတျအပွောငျးအလဲ မွနျတာတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။
Related article >>> ယောငျးတို့တှေ အံ့သွသှားရမယျ့ Omega-3 ရဲ့အကြိုးကြေးဇူး (၆) ခကျြ
သကွားတှေ နို့တှမေပါတဲ့ ခြောကလကျစဈစဈက ယောငျးကို အာရုံစူးစိုကျနိုငျအောငျ ကူညီပေးမှာပါ။ ခြောကလကျမှာပါတဲ့ မကျဂနီဆီယမျက စိတျဖိစီးမှုတှကေို လြှော့ခပြေးပွီး ပြျောရှငျခွငျးဟျောမုနျးလေးတှဖွေဈတဲ့ endorphins နဲ့ serotonin တှကေိုလညျး မွှငျ့တငျပေးတာကွောငျ့ စိတျကွညျလငျပြျောရှငျစတောပေါ့။ ပြျောခငျြဇောနဲ့ အမြားကွီးတော့ မစားနဲ့ပေါ့နျော။ တနျဆေးလှနျဘေးတဲ့ …
အစအေ့ဆံတှဟော ဗီတာမငျဘီ၊ ဗီတာမငျအီး၊ မကျဂနီဆီယမျတှေ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ ဘဏျတိုကျကွီးတှပေါ။ Amino acid လညျးပါတာကွောငျ့ အာရုံစိုကျအားပိုကောငျးစပွေီး တဈနကေို့ တဈအောငျစလောကျတော့ စားပေးသငျ့ပါတယျ။
Related article >>> ယောငျးရဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အလှအပအတှကျ ဗီတာမငျ အီးက ပေးစှမျးနိုငျတဲ့ ကောငျးကြိုး (၄)သှယျ
ကဲ … ဒီလောကျဆို မတေ့တျတဲ့ ယောငျးတှလေညျး မှတျဉာဏျအားကောငျးအောငျ ဘာတှစေားရမလဲဆိုတာ သိကွပွီပေါ့နျော။ Junk food လို့ချေါတဲ့ သှားရညျစာတှကေို အပွတျမဖွတျနိုငျဘူးဆိုရငျတောငျ တဈပတျကိုတဈခါလောကျပဲ စားပွီး ကနျြတဲ့ရကျတှမှော ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့အစားအစာတှကေို စားပေးပါ။ ကနျြးမာလှပတဲ့ဘဝကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ …
Tagged Concentration, focus, Food, Health, Healthy, lifestyle, Memory
Stella ကတော့ Fashion နဲ့ Beauty ကို ဝါသနာပါလို့ For Her Myanmar မှာ ယောင်းယောင်းတို့အတွက် beauty hacks တွေ, fashion နဲ့ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို အဓိကဝေမျှပေးသွားမှာပါ။ သုတရသတွေကိုလည်း လက်လှမ်းမှီသလောက် ရေးပေးပါသေးတယ်။
Posted on August 15, 2017 Author Alex Aung
အခက်အခဲတွေကိုတွန်းလှန်ကျော်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အား ပြည့်နေရုံသာမကဘဲ စိတ်ခွန်အား တောင့်တင်းခိုင်မာဖို့ လည်းလိုပါတယ်။ စိတ်ခွန်အား ဆိုတာကလည်း ရဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ ကြိုးစားတည်ဆောက်ရင်ရနိုင်တာကြောင့် ညီမလေးတို့ ကြိုးစားစေချင်ကြပါတယ်။ စိတ်ခွန်အား တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုစေမဲ့ အကြောင်း တစ်ခုက လေးစားအားကျတဲ့သူရှိခြင်းပါ။ ခုခေတ်စကားဆိုရင် အိုင်ဒိုလ် (Idol) ပေါ့။ ခုဖော်ပြမဲ့အကြောင်းအရာဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မိန်းကလေးတွေသာမကပါဘူး ယောက်ျားလေး တွေအပါ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကလေးစားရသူ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သည်ထူးခြားပြောင်မြောက်လှတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကို ညီမလေးတို့ဖတ်ပြီးတဲ့ အခါ ညီမလေးတို့ အနေနဲ့လည်း ကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုကောင်းမွန်သွားအောင်ပြုလုပ်မလဲ၊ ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရောက်နေပါစေ၊ ဘယ်အသိုင်းအဝိုင်းမှာဖြစ်နေပါစေ၊ ဘယ်လို အချိန်ဖြစ်နေပါစေ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပါဝင်နိုင်လာတယ်ဆိုတာသိလာပါလိမ့်မယ်။ Anne Frank (1929-1945) , photo is from reporternewspapers […]
Friendship Knowledge Relationships
ခံစားချက်မဖော်ပြတတ်တဲ့ ကောင်မလေးအများစု ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာများ
Posted on May 1, 2017 October 23, 2018 Author Hana
တော်တော်အသည်းမာတဲ့မိန်းကလေးပဲ၊ အရမ်းရက်စက်တာပဲလို့ မကြာခဏပြောခံနေရပြီလား။
အိမ်ထောင်ရှင် ညီမလေးတို့ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ သားအိမ်ခေါင်း ရောင်ရမ်းခြင်း
Posted on December 25, 2018 December 25, 2018 Author မယ်တင် (ဆေး-၁)
အဖြူဆင်းတယ်၊ အနံ့နံတယ်ဆိုရင် မပေါ့သင့်နော်..
နားထောင်လိုက်တာနဲ့ သင်္ကြန်အငွေ့အသက်တွေလွှမ်းခြုံသွားစေမယ့် တေးသီချင်းများ